GED ဆိုတာဘာလဲ®? | အဆိုပါGED®ဒီပလိုမာနှင့်မည်သို့စမ်းသပ်ယူအကြောင်းကိုလေ့လာပါ | USAHello
လူအတော်များများဟာကျွန်တော်တို့ကိုမမေး, "GED ဘာ?"ဒီGED®ဒီပလိုမာသင် USA တွင်အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောအသိပညာရှိသည်ပြသ. သင့်ရဲ့GED®ဒီပလိုမာရယူခြင်းသင်ပိုမိုအောင်မြင်သောဖြစ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ဒါဟာသင်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့နှင့်သင်ကောလိပ်ကိုသွားခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်. သင်မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာပါ, “GED ဆိုတာဘာလဲ®?"
အတော်များများကအမေရိကန်များနှင့်အချို့ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအထက်တန်းကျောင်းမပြီးနိုင်ခဲ့ကြသည်. အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမပါဘဲ, ကအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်ကောင်းရဖို့နဲ့အောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင်တို့မူကား, GED®စမ်းသပ်လွန်သွားလျှင်, သင်တစ်ဦးဒီပလိုမာရ (လက်မှတ်) သင့်ရဲ့အခြေအနေမှ. ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းတခုတော့ဟုခေါ်သည် (HSE) ဒီပလိုမာလက်မှတ်, ဒါကြောင့်သင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ထားတဲ့ HSE စမ်းသပ်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းတွေ့မြင်သို့မဟုတ်နားထောင်မည်အကြောင်း.
အဆိုပါGED®ဒီပလိုမာသင်အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ပြောပါတယ်. ဒါကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်! မသာသင်တစ်ဦးပညာရေးရရှိပါလိမ့်မယ်, သင်မူကား, ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနာရီပေါင်းများစွာယူ. ဒါဟာသင်သီးခြားရက်ယူနိုငျကွောငျးလေးစိတျအပိုငျးသို့ကွဲပြား. သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စမ်းသပ်ယူပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအင်္ဂလိပ်အတွက်စမ်းသပ်မှုယူနိုင်ပါသည်, စပိန်, သို့မဟုတ်ပွငျသစျ.
စမ်းသပ်မှုအပေါ်လေးခုဘာသာရပ်များရှိပါတယ်: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, သိပ္ပံ, သင်္ချာ, နှင့်ဘာသာစကားအနုပညာ (စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း). သင်သည်များစွာသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကာအက်ဆေးရေးထားမည်.
USAHello ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းGED®အတန်း စမ်းသပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ကိုဖုံးလွှမ်း. သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအခါတိုင်းသင်တစ်ဦးလူတန်းစားစတင်နိုင်ပါသည်. အများစုမှာကျောင်းသားများကနှစ်လမှနှစ်ပတ်အတွင်းတဦးတည်းဘာသာရပ်ပြီးစီး. သငျသညျအချိန်မရွေးစတင်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျသင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်ယူနိုင်ပါတယ်. သငျသညျသငျနှငျ့အတူစတင်ချင်ရာဘာသာရပ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
သငျသညျတိုင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိGED®စမ်းသပ် ယူ. မသွားနိုင်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သောစမ်းသပ်ရှာဖွေဖို့အောက်ကစားပွဲမှာကြည့်ပါ.
သင့်ရဲ့ပြည်နယ်GED®စမ်းသပ်ကမ်းလှမ်းရန်မပါဘူးဆိုရင်, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်! သင်ဆဲသကဲ့သို့ကောင်းသောအသောဒီပလိုမာရနိုင်. သင်သည်သင်၏ပြည်နယ်အတွင်းရှိ TASC စမ်းသပ်မှုဒါမှမဟုတ် HiSET စမ်းသပ်မှုယူနိုင်ပါသည်. အရာတစျခုကိုမြင်ပြန်စားပွဲ၌ကွညျ့ရှု.
အဆိုပါ HiSET စမ်းသပ်မှုGED®စမ်းသပ်မှုကဲ့သို့ဖြစ်၏. အဆိုပါ HiSET ™ဒီပလိုမာသင် USA တွင်အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ပြောပါတယ်.
သင်တို့အဘို့အမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်GED®စမ်းသပ်မှုယူရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာပါ. သင်တို့ရှိသမျှလေးဘာသာရပ်များလွန်သောအခါ, သင်တစ်ဦးဒီပလိုမာကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
ဒီနေရာတွင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် လက်ပံအနီးနထေိုငျသူမြားအဘို့အပညာသင်ဆု, အော်ရီဂွန်. သင်ပိုမိုပညာသင်ဆု၏သိလျှင်, ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ ပိုပြီးလူတွေGED®ပညာသင်ဆုကိုရှာဖွေနိုင်အောင်နဲ့ကျနော်တို့ဒီမှာစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်.